ဒေါင်းလုပ် PHYSXCUDART_20.DLL - DLL - 2019
အစစ်အမှန်ရှိသမျှသောလောကီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာလွှဲပြောင်းရန်တစ်ဦးမျှမျှတတလက်တွေ့ကျကျဖွဲ့စည်းနိုင်ခေတ်သစ်ကွန်ပျူတာဂိမ်း, အထူးသဖြင့် Triple-တစ်ဦးကစီမံကိန်းများကို။ သင်တို့မူကားတစ်ဦးသက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်လုံလောက်သော software ကိုထောက်ခံမှုရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဂိမ်းထဲမှာရူပဗေဒအများစုအတွက်တာဝန်ရှိ PhysX အထုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအပလီကေး start သောအခါ, အသုံးပြုသူ physxcudart_20.dll စာကြည့်တိုက်ဖျောပွသောအမှား, စောငျ့ရှောကျနိုငျသညျ။ ဤဆောင်းပါးက fix ဖို့ဘယ်လိုရှင်းပြ, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်က PhysX နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်လိမ့်မယ်။
အမှားက c physxcudart_20.dll ဆုံး
ကျနော်တို့သုံးနည်းလမ်းများပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုရန်ဖို့ဘယ်လိုနိဂုံးချုပ်မတိုင်မီလူတိုင်းနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရရန်အကြံပြုသည်ဒါထိုသူအပေါင်းတို့သည်, Self-လုံလောက်သောဖြစ်ကြပြီးအဓိကအားဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေကွဲပြား။
DLL-Files.com လိုင်း - စနစ်အတွက်ပြောင်းလဲနေသော link ကိုစာကြည့်တိုက်အမျိုးမျိုးရှာပြီး install ဖို့ဒီဇိုင်းအထူးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်အားဖြင့်သင်တို့ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဒီ physxcudart_20.dll ဖိုင်ထဲမှာထားနိုင်သည်
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် program ကို install လုပ်ပြီးပါက run ။
စာကြည့်တိုက်၏နာမတော်အဘို့ရှာဖွေတစ်ဦး string ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
သင့်လျော်သော button ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ရှာဖွေရေးဖြုန်းနေကြတယ်။
အဲဒီနောကျ physxcudart_20.dll ဒေါင်းလုပ်ရယူပြီးသွင်းယူအသီးသီး, ဒီဖိုင်ရဲ့အမှားတစ်ခုရည်ညွှန်းနှင့်အတူပျောက်ဆုံးသွားပါလိမ့်မည်, နှင့်ဂိမ်းသို့မဟုတ်အစီအစဉ်များပြဿနာများမပါဘဲပြေးကြလိမ့်မည်ပါလိမ့်မည်။
Method ကို 2: PhysX ချိန်ညှိခြင်း
DLL ကို physxcudart_20.dll စာကြည့်တိုက်၏အမည်ပေါ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်သကဲ့သို့, software ကိုအထုပ် PhysX ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေကျနော်တို့က installation ကိုအထုပ်စဉ်အတွင်း installed ပါလိမ့်မည်ကောက်ချက်ချနှင့် physxcudart_20.dll ဖိုင်နိုင်ပါတယ်။ အောက်တွင်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် PhysX download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းထားပါသည်။
လွှတ်တင်ခြင်း PhysX installer ကို
ထုတ်ကုန်၏တရားဝင် website ကိုသွားပါ။
စာနယ်ဇင်းများ "အခုဆိုရင် Download".
စာနယ်ဇင်းများ "Accept and download" ဒေါင်းလုဒ်စတင်ရန်။
အားလုံးလုပ်ဆောင်ချက် PhysX installer ကိုပြီးနောက် PC ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သူကအတူဖိုင်တွဲသွားလာရန်နှင့် file ကို run:
သင် installation ကိုစတင်ရန်လိုအပ်သမျှပြင်ဆင်ထားရန် installer ကိုစောင့်ပါ။
အားလုံးအစိတ်အပိုင်းများတပ်ဆင်မှုအတွက်စောင့်ဆိုင်းပါ, အဲဒီနောက် PhysX ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ကိုပိတ်ပြီး".
အခုတော့ physxcudart_20.dll စာကြည့်တိုက်စနစ်အတွက်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်လိုအပ်သမျှသောဂိမ်းများ, ပြဿနာများကိုမပါဘဲပြေးပါလိမ့်မယ်။
Method ကို 3: physxcudart_20.dll Download
A ကောင်းဆုံး option ကို physxcudart_20.dll ပြောင်းလဲနေသော link ကိုစာကြည့်တိုက်ဖိုင်စနစ် Self-installation ကို၏ပြဿနာပပျောက်ဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျစနစ်ဖိုင်တွဲထဲမှာနေရာချရမည်ဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, Window အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဗားရှင်းအတွက်ကြောင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားတည်နေရာနဲ့ name ကိုရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့ဒီဆောင်းပါး၌သင်တို့ရှိသမျှကိုတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါ DLL ကိုတပ်ဆင်၏ဥပမာထဲမှာကို Windows7မှာပြသပါလိမ့်မည်။
စာကြည့်တိုက်ကို Download လုပ်ပါနဲ့ဖိုင်ကိုအတူ folder ကိုဖွင့်လှစ်။
ညာဘက်ပေါ်မှာ click နှိပ်ခြင်းနှင့်ကို select "Copy ကူး".
စနစ် folder ကိုသွားပါ။
ညာဘက်ကိုနှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "ထည့်".
အထက်ပါအဆင့်များဖျော်ဖြေပြီးနောက်အမှားနေဆဲဘယ်နေရာမှာမဆိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အများစုမှာဖွယ်ရှိ, Window ရိုးရှင်းစွာဖိုင်ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်ခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်ဤသင်တို့သည်ငါတို့၏ site ပေါ်တွင်သက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးအတွက်ညွှန်ကြားချက်အောက်ပါ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ဗီဒီယို Watch: Medal of Honor - ERROR (အောက်တိုဘာလ 2019).